रविको नयाँ दल : नागरिक निरासाको उपयोग मात्र कि साँच्चै हस्तक्षेप पनि ? « Canada Nepal
रविको नयाँ दल : नागरिक निरासाको उपयोग मात्र कि साँच्चै हस्तक्षेप पनि ?
रवि लामिछाने एक सञ्चारकर्मीका रुपमा निकै चर्चामा रहे । खासगरी टेलिभिजन कार्यक्रममा उनको शैली, विषयवस्तुको उठान र पारा चर्चामा मात्र रहेन धेरै पटक विवादमा पनि तानियो । दशक पहिले नेपाल टेलिभिजनमा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम चलाउने रवि त्यसपछि अमेरिका बसाईलाई बिट मार्दै नेपाल फर्किए । फेरि टेलिभिजन कर्ममै लागे । घण्टौंसम्म लगातार टक शो गरेर कीर्तिमान बनाएपछि उनी अझ चर्चामा पुगे । त्यस्तै सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रम हुँदै सिधा कुरा जनतासँगले उनको करिअरको उचाइ ह्वात्तै बढाई दियो ।
त्यहाँबाट उनको समेत लगानी रहेको भनिएको टेलिभिजनको महाप्रवन्धकका रुपमा रहेका उनी अन्ततः त्यहाँबाट पनि बाहिरिए र राजनीतिमा लाग्ने घोषणा गरे । यसो भन्न सकिन्छ कि गएका पाँच सात बर्षमा टेलिभिजनमार्फत कमाएको ‘लोकप्रियता’ लाई उनले राजनीतिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने अलिकति जोखिम र अलिकति हिम्मत बटुलेका हुन् ।
राजनीतिक घोषणा कार्यक्रममार्फत उनले मंगलबार नेपाल स्वतन्त्र पार्टी नामको नयाँ दल खोल्ने घोषणा गरे । घण्टी चुनाव चिन्ह प्रस्ताव गर्दै उनले निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन समेत दिएका छन् । आयोगले यसबारे निणर्य हुन अझै केही दिन लाग्ने बताएको छ । नयाँ दल घोषणा गर्दैगर्दा फेरि रवि एक पटक चर्चामा आएका छन् । स्वतन्त्र पार्टी नाम राखेकोमा कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरिरहेका छन् ।
कतिपयले भने मूलधारे राजनीतिक दलबाट वाक्क भएका नागरिकले नयाँ दल र उम्मेदवारलाई साथ दिन सक्ने भएकाले कम नआँक्न सुझाव दिइरहेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार घोषणाको लहर चलिरहेका बेला रविले भने नयाँ दल दर्ता गर्ने निणर्य गरे । उनले आफ्नो दलमा कोही पनि कार्यकर्ता नहुने, ब्यापारिक घरानासँग रकम नलिने, प्रधानमन्त्री र मुख्य मन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने, नातावादलाई ठाउँ नदिने, भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम बन्ने, राजनीतिक विकृतिविरुद्द निर्मम भएर लाग्ने जस्ता घोषणा गरेका छन् ।
तर मुख्य कुरा उनले नयाँ दलको सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण, राजनीतिकवादलगायतका मुख्य कुराहरु केही सार्वजनिक गरेका छैनन् । भन्नलाई उनले आफू यसको तयारी र छलफलकै क्रममा रहेको बताएका छन् तर पार्टी घोषणा कार्यक्रममा दल हुनका लागि चाहिने मुख्य कुराकैबारे मौन रहनु उपयुक्त पक्कै होइन । टेलिभिजन कार्यक्रममा सरकार र सरोकारवालालाई गालीगलौच, छुद्र बचन र कतिपय अवस्थामा अभद्र र अमर्यादित टिप्पणी समेत गरेको भनेर आलोचना खेप्दै आएका उनले घोषणासभामा पनि त्यस्तै छनक देखाए । अर्को दललाई गाली वा आलोचना गर्दा आफ्ना कुराहरु राख्न उनी चुकेको देखिन्थ्यो ।
राष्ट्रिय झण्डा काँधमा राखेर उपस्थित भएका उनीसँगै दलमा अरु को-को कुन-कुन भूमिकामा छन् भन्ने कुरा पनि खुल्न सकेन । उनले २१ जनाको कमिटी गठन गरेको जानकारी गराउने क्रममा स्वीकारे । उनले, ‘अहिले हामीसँग देशले चिनेका मानिसहरु छैनन्, तर देशलाई चिन्नेहरु छन् ।’ उनले देश बनाउने आइडियाहरु शेयर गर्नका लागि आम नागरिक र विज्ञसँग आग्रह पनि गरेका छन् । रविले संसदीय चुनावमा उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरे तर कुन क्षेत्रबाट भन्ने चाहिँ बताउन सकेनन् । उनको आशय थियो- ‘जित्ने ठाउँको खोजी भइरहेको छ ।’
उनको घोषणासभामा सयौँ मानिस उपस्थित थिए । राष्ट्रिय सभागृहको हलमा छिर्न नपाएपछि केही मुख्य ढोका फोरेर भित्र पसे तर मुख्य हल खचाखच भइसकेको थियो । जसका कारण कोही निरास त कोही आक्रोशित देखिन्थे । टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालनकै शैलीमा आक्रोश मिश्रित भाषण गरेका लामिछाने बेलाबेला झुक्किएर ‘आदरणीय दर्शकवृन्द’ भनिरहेका हुन्थे ।
२०४६ सालमा बहुदल आएपछि नेपालमा च्याउ उम्रिएसरी उम्रिएका राजनीतिक दलहरुको भीडमा नयाँ दलको स्थान के हुने त्यो हेर्न बाँकी छ । पार्टी घोषणाको दिन लामिछानेले बजाएको घण्टीको आवाज भने देश विदेशमा फैलिएको छ । भुल्न नहुने कुरा यहाँनेर के चाहिँ हो भने मूलधारका दलहरु गतिला भएनन् भनेर वैकल्पिक राजनीति गर्ने घोषणासहित पूवर् प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूवर् पत्रकार रवीन्द्र मिश्रलगायतले खोलेका दलहरुले सोचेको जस्तो गरी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकै हुन् ।
अर्कोतिर स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका हर्क साम्पाङ र वालेन्द्र शाहहरुको उदाहरणकाबीच ‘स्वतन्त्र धरातल’ अनि मूलधारे दलप्रति नागरिक वितृष्णा र निरासाको उपयोग मात्र गर्ने हो कि धेरैले भन्ने गरेको बैकल्पिक राजनीतिको रिक्त स्थान पूरा गर्ने हो त्यो देख्न भने केही समय कुर्नुपर्नेछ । नयाँ दलको घण्टीको गुञ्जन मूलधारका राजनीतिक दल र तिनका नेताको कानमा पनि पक्कै पुगेको हुनुपर्छ । अहिलेलाई यो दललाई शंकाको सुविधा दिउँ । आशा गरौं, अबका केही दिनमा नयाँ दलको नयाँ यात्रा र राजनीतिक चित्रको छनक पाइनेछ ।
प्रकाशित मिति : असार ७, २०७९ मंगलबार ६ : ५५ बजे